အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းသည်စိုစွတ်သော / ခြောက်သွေ့သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးအစာထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်ရောင်းရန်ဖြစ်သည်
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်,တစ်ခုမှာခြောက်သွေ့သောခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြစ်သည်, အခြားတစ်ခုမှာစိုစွတ်သောအစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံဖြစ်သည်,စိုစွတ်သောအမျိုးအစားကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပူပြင်းတဲ့ရေနွေးငွေ့ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့်ဘွိုင်လာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်. ၄ င်းသည်အမျိုးမျိုးသော feeds အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး aqua အတွက် floating feeds များထုတ်လုပ်နိုင်သည်,ငါးခူ,goden ငါး,ပုစွန်, ဂဏန်း, ။, မြဝတီ, စသည်တို့, နှင့်ခွေးအစားအစာကဲ့သို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ,ကြောင်အစားအစာနှင့်စသည်တို့
ဤအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အခြေခံကုန်ကြမ်းအဖြစ်မြင့်မားသော puff ဒီဂရီပြောင်းဖူးမှုန့်သီးနှံများကိုအသုံးပြုသည်, အရိုးမုန့်ညက်, အသား, ပရိုတိန်း, ဗီတာမင်, ဖိုင်ဘာနှင့်အခြားအာဟာရ, ခွေးအစာကဲ့သို့သောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်များ၏ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ခိုင်ခံ့သောညှစ်နေသောချက်ချင်း puffing ပုံမှတစ်ဆင့် screw extruder စက်ဖြင့်,ကြောင်အစားအစာစသည်, ခြောက်သွေ့ပြီးတဲ့နောက်အနံ့အရသာသည်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များ၏အရသာကိုတိုးတက်စေသည်, နှင့်နောက်ဆုံးတော့အော်တိုထုပ်ပိုး၏တစုံ.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်,တစ်ခုမှာခြောက်သွေ့သောခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြစ်သည်, အခြားတစ်ခုမှာစိုစွတ်သောအစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံဖြစ်သည်,စိုစွတ်သောအမျိုးအစားကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပူပြင်းတဲ့ရေနွေးငွေ့ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့်ဘွိုင်လာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်. ၎င်းသည်အစာအမျိုးမျိုးနှင့် aqua feed အတွက် floating feeds ထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်,ငါးခူအစားအစာတောင့်,goden ငါးအစာကျွေးတောင့်,ပုစွန်အစာတောင့်, ဂဏန်း, ။, မြဝတီ, စသည်တို့, နှင့်ခွေးအစားအစာကဲ့သို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ,ကြောင်အစားအစာနှင့်စသည်တို့. တောင့်သည်အရွယ်အစားမှာမတူညီသောအရွယ်အစားငါးများအား ၀.၉ မှ ၁၅ မီလီမီတာအထိရှိနိုင်သည်. ဒီခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကအရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အလတ်စားနှင့်အကြီးစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံအတွက် ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်,ငါးမွေးမြူရေးခြံနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာလုပ်ငန်း.
စိုစွတ်သော vs. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများခြောက်သွေ့
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်မှု၏စိုစွတ်သောခြမ်းတွင်, LA သည်ဘူးခွံများအတွက် retort စနစ်များကိုအထူးပြုသည်, အိပ်ယာခင်း, ခွက်နှင့်ဖလား,Greg Jacob ကစိုစွတ်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများအတွက်ထုပ်ပိုးရာတွင်အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာအရွယ်အစားသေးငယ်သည့်အရွယ်အစားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်, ရေခဲသေတ္တာထဲမှာကြာရှည်စွာသိုလှောင်ပြီးတဲ့နောက်ဆွဲဆောင်နိုင်မှုပိုနည်းတဲ့ပိုကြီးတဲ့ကွန်တိန်နာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်စားသုံးသူတွေဟာအဆင်ပြေလွယ်ကူမှုနဲ့လျော့နည်းမှုအတွက်ပိုနှစ်သက်ကြပါတယ်.
သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားအသစ်တွေမှာဥပမာ ၃ အောင်စရှိတယ်. ငါးနှစ်ခွဲအောင်စ. အခွံချွတ် lids နှင့်အတူဘူးခွံများ,"ဟုသူကပြောသည်. “ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကပလတ်စတစ်အိတ်တွေဟာလူကြိုက်များခဲ့တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အတန်ငယ်ချွတ်ကျဆင်းသွားပါတယ်, ယခုပလပ်စတစ်ခွက်များနှင့်ဖလားများပိုမိုလိုအပ်လာသည်။ "
ဒါပေမယ့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဆက်လက်. Topeka ၏ဟေးလ်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အာဟာရအားဖြင့်သိပ္ပံနည်းကျခြောက်သွေ့တဲ့ကြောင်အစားအစာ, KS, ဥပမာအားဖြင့်, သုံးနှင့်တစ်နှစ်ခွဲ - ပေါင်ထဲမှာလာပါတယ်. လွယ်ကူသောဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပစ်ခြင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလိမ္မာပါးနပ်သော Velcro အပေါ်ဆုံးအစင်းဖြင့်ပလတ်စတစ်အိတ်.
Allpax retorts နှင့်အလိုအလျောက်တင်နှင့်ချစနစ်များကိုထုတ်လုပ်သည်. ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်သော့ချက် element တစ်ခုသည် load နှင့်разгမြန်နှုန်းအပေါ်များစွာမူတည်သည်. သံဗူးများကိုသံလိုက်ကိုင်တွယ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အဟောင်းပုံစံ retort basket loaders များသည်များသောအားဖြင့် throughput ရှိသည် 500 တစ်မိနစ်လျှင်ယူနစ်. ဒီနေ့ရဲ့ loader ကိုအများကြီးပိုမြန်ဖြစ်ကြသည်. ဥပမာတစ်ခုမှာ Allpax ၏ Hyperloader ယူနစ်ဖြစ်သည်, သောနှုန်းမှာစဉ်ဆက်မပြတ်ရွေ့လျားမှုအတွက် retort ခြင်းတောင်းသို့ဘူးခွံလှည်းနိုင်ပါတယ် 3,000 3-အောင်စများအတွက်တစ်မိနစ်လျှင်ယူနစ်. ဘူးခွံများ.
ကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်းများအားဖြင့်လိုအပ်သောအရွယ်အစားအားဖြင့်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ရပါမည် အစာကြိတ်ခွဲစက်. သင်၏ကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်အစာကြိတ်စက်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါသည်: feed Hammer Mill သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအစာကြိတ်ခွဲစက်ရုံများအတွက်သင့်တော်သည်; SPSF feed Hammer ကြိတ်သည်ကြီးမားသောနှင့်အလတ်စားမွေးမြူရေးနှင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှကုန်ကြမ်းများကိုကြိတ်ရန်အသုံးပြုသည်;
ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်ရာတွင်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်. အခြေခံဖြစ်စဉ်မှာ fomula အရကုန်ကြမ်းများကိုအလေးချိန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ချိန်ရန်ဖြစ်သည်, ထို့နောက်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်ကြိတ်ခွဲခြင်း၌သူတို့ကိုငါသွန်းလောင်း, နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အားလုံးပစ္စည်းများယာယီသိုလှောင်မှု Silo ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နေကြသည်. ထိုအခါအားလုံး matrials အဆင်သင့်ဖြစ်ကြသည်, ရောနှောများအတွက်ရောနှောသူတို့ကိုအစာကျွေး.
Extruding သည်အပူချိန်မြင့်မားပြီးအချိန်တိုအတွင်းအပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အစားအစာအာဟာရများပျက်စီးခြင်းကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကဘဲ, ပရိုတိန်းဓာတ်၏အစာကြေတိုးတက်အောင်, ဒါပေမယ့်လည်း anti-nutrient အစိတ်အပိုင်းများနှင့် microorganism ကိုဖကျြဆီး. ထိုကဲ့သို့သောပတ်ပတ်လည်အဖြစ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခြောက်သွေ့တဲ့အစားအစာပုံစံအားလုံး, တြိဂံ, ပန်းပွင့်ပုံစံနှင့်အရိုးပုံသဏ္differentာန်ကွဲပြားခြားနားသောမှိုမှတဆင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် (တင်းပလိတ်များ) အဆိုပါအစာကျွေးခြင်း extruder စက်၏. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်မှု၌တည်၏, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာအာဟာရကောင်းမွန်စေရန်အတွက်အဆီထည့်လေ့ရှိသည်, နှင့်ဤအေးစက်ဖြစ်စဉ်ကိုထွက်သယ်ဆောင်သည်. အပြင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာစားပွဲသို့မတူညီသောအရောင်များကိုပေးရန်, ထုတ်လုပ်သူများသောအားဖြင့် extruding chamber တွင်အရောင်ခြယ်ထားသောရေထည့်သည်.
♦ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ခြင်း ခြောက်သွေ့
ခြောက်သွေ့သောအပိုင်းကိုအဓိကအားဖြင့် extruded အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာတွင်ရေဖယ်ရှားခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်. extrusion ပြီးနောက်, ပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အတော်အတန်ပျော့ပျောင်းပြီးရေပါဝင်မှုသည် ၂၀ မှ ၃၀% အထိရှိသည်။. ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်, အချောထုတ်ကုန်အစိုဓာတ်ကို 8% ~ 10% မှာထိန်းချုပ်ထားသည်, အရာပစ္စည်းအချိန်အတိအကျကာလ၌သိမ်းဆည်းထားကြောင်းသေချာစေနိုင်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွက်ခါးပတ်ခြောက်စက်သည်အစဉ်အမြဲရွေ့လျားနေသောခါးပတ်ခြောက်စက်ဖြစ်ပါသည်. extruder မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သောအတောင့်အတောများကိုဝါယာကြိုးကွက် (သို့) ဖောက်ထားသည့်ပန်းကန်ခါးပတ်ပေါ်တင်ပေါ်တွင်အလွှာများထည့်။ ခြောက်သွေ့သောအခန်းများမှတဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သယ်ဆောင်သည်။.
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း, ခြောက်သွေ့သောလေထုကိုထုတ်ကုန်အလွှာများမှအကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်သန်းသည်. သငျသညျစိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာကျွေးစက်ကိုရွေးချယ်ပါလျှင်, ကျနော်တို့ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစားလုံးလေးများလေမှုတ်စက်အကြံပြုပါသည်.
ဆီနှင့်အဆီသည်စွမ်းအင်အတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကြီးထွားမှုလိုအပ်ချက်အရဆီနှင့်အဆီ ၂% မှ ၄၀% ကိုပုံသေနည်းတွင်ထည့်နိုင်သည်. ကျနော်တို့ဖော်မြူလာအတွက်အဆီ၏အကြောင်းအရာအကြံပြုအပ်ပါသည်, ၎င်းကို extruder အတွင်းရှိစုစုပေါင်းဆီပါဝင်သည် 12%. ရေနံများ၏အကြောင်းအရာကိုကျော်လိုအပ်သည်ဆိုပါက 12% နှင့် granular ပစ္စည်းများ၏မြဲသိသိသာသာလျှော့ချလိမ့်မည်. အဆိုပါ extruded ပစ္စည်းထက်ပိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင် 12% ရေနံအကြောင်းအရာ, အပိုဆီကိုခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ပြင်ပရေမှုန်ရေမွှားများထည့်ရန်အကြံပြုသည်. ၎င်းကိုဆီမည်မျှထည့်သည်ကို မူတည်၍ ပုံမှန်ဖိအားသို့မဟုတ်လေဟာနယ်မှုတ်ဆေးတွင်သုံးနိုင်သည်. ပြင်ပမှုတ်လိမ်းခြင်းသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်. ရေနံအပြင်, အချို့သောအမှုန့်များကိုဆွဲဆောင်သောအရာသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာများစားသုံးရန်အတွက်ပက်ဖြန်းသည်.
♦ အအေး & ချစ်ခြင်း
အအေးပေးသည့်အပိုင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းများကိုမြင့်မားသောအပူချိန်မှအခန်းအပူချိန်နီးပါးအထိအအေးပေးပြီးအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကိုဖယ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်. ဒါ့အပြင်, ဒီဖြစ်စဉ်၌, အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောစားနပ်ရိက္ခာပုံးများသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများနှင့်သီးခြားစီဖြစ်လိမ့်မည်.
အချို့ထုတ်လုပ်သူများသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများကိုအိတ်တစ်လုံးဖြင့်ထုပ်သည်, သို့သော်အချို့သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာပုံးပေါင်းများစွာကိုမတူကွဲပြားသောပုံစံများနှင့်အရောင်များကိုအတူတကွရောနှော။ တစ်အိတ်ထဲထည့်ကြသည်. သမားရိုးကျအလေးချိန်ပါဝင်သည်: 5ကီလိုဂရမ်, 1ကီလိုဂရမ်, 500ဆ, 20ဆ, ထို့အပြင်အသင့်အတင့်တောင့်များကိုသိုလှောင်ရန်လွယ်ကူစေရန် 20-50kg ကြီးမားသော package.to, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖောက်သည်များ၏မျက်စိဖမ်း, သူတို့စနစ်တကျထုပ်ပိုးရပါမည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်နှင့်အတူ, အချောတောင့်အိတ်သို့ထုပ်ပိုးနိုင်ပါတယ်, အလေးချိန်, ပါး, နှင့်အလိုအလျှောက်တံဆိပ်ခတ်, ၎င်းသည်လုပ်အားနှင့်အချိန်ကုန်သက်သာပြီးအကြီးစားထုတ်လုပ်မှု၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်. ဒီထုပ်ပိုးစက်သည်, အလိုအလျောက်အပူစာရိုက်ကုဒ်, အလိုအလျောက်အိတ်အပ်ချုပ်နှင့်အလိုအလျောက်ချည်ဖြတ်တောက်ခြင်း optional ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနိုင်ပါတယ်.